I-Tweedle, iklayenti le-Twitter le-Android | Izindaba zamagajethi
UTweedle, iklayenti le-Twitter le-Android
Noma amadivayisi I-Android inohlelo lwayo lwe-Twitter (futhi futhi, isikhulu), labo abaphethe ukuphatha inethiwekhi yabo yokuxhumana nabantu abavela kule ndawo yokusebenza bavame ukuhlangabezana nenkinga eyodwa noma enye lapho bethumela imiyalezo noma bebukeza leyo eshicilelwe abangane bethu. Enye indlela enhle engathuthukisa lesi simo ukuthi I-Tweedle, okuyiklayenti elenziwe ngabantu besithathu futhi ebengeke isebenze kahle ukwenza okuthunyelwe ku-Twitter kube lula kakhulu kunakuqala.
I-Tweedle yilokho nje, okusho ukuthi, iklayenti elincane ebesingalisebenzisela lona ixhume kunethiwekhi yethu ye-Twitter, ukukwazi ukuhlola kamuva konke obekulokhu kwenzeka odongeni lwethu futhi, thumela imiyalezo evela kuleli klayenti ngaphandle kokuthi uvule i-Twitter ngqo.
Landa futhi ufake iTweedle ku-Android
Ngakho-ke ungalanda ku I-TweedleKufanele nje uye esitolo se-Google Play bese ufaka igama laleli klayenti kunjini yakho yokusesha; Ngokushesha uzothola njengemiphumela I-Tweedle Okwe-Android; vele ukhethe bese uchofoza ku- «faka«, Ngakho-ke ngemuva kwemizuzwana embalwa ungayisebenzisa kusuka kudivayisi yakho ye-Android.
Isixhumanisi se-akhawunti yakho ye-Twitter kufanele senziwe ngesandla, okuphakamisa ukuthi kufanele ufake igama lomsebenzisi nephasiwedi efanele (imininingwane yokufinyelela); Akukhathalekile ukuthi phambilini uvule i-akhawunti yakho ye-Twitter ngemininingwane efanele kudivayisi efanayo, kusukela I-Tweedle ngeke nje ikuthole ngakho-ke, imali engenayo esishilo futhi sayincoma ngaphambili kufanele yenziwe; emva kwalokho uzothola isikrini sokuqala sokwamukela, lapho kuzofanele uchofoze khona kuphela "Thepha lapha ukuze uqale", Noma ngamanye amagama, ukuthi uthinta inkinobho encane ukuqala insiza.
Into yokuqala ozoyibona ukuxhumana kwe I-Tweedle futhi lapho, ikakhulukazi amathebhu wolwazi ama-3 akhona, okuyi:
Uma ubheka ibha eluhlaza okwesibhakabhaka phezulu (ngaphezulu kwalawa mathebhu esiwabalule ngenhla), ungancoma ukuthi ngasekhoneni elingenhla kwesobunxele ilogo ye I-Tweedle, kanti ngakolunye uhlangothi kuyizinketho zoku:
Hlola ku-akhawunti yakho ye-Twitter.
Faka ukumiswa I-Tweedle.
Sifuna ukusho lesi simo ngenxa yesici esithakazelisa kakhulu esikwazile ukusibona; Ibha ephezulu lapho kutholakala khona izinto ezishiwo ngenhla icishe ifane nalokho ongakuthokozela kusixhumi esibonakalayo se-WhatsApp, ikakhulukazi ebhekisa endaweni esekhoneni eliphezulu kwesokudla (nezinto esizibale ngaphambili). Ngokusobala, ohlangothini olungaphezulu kwesobunxele lwe-WhatsApp sizothola i-logo yakho. Konke kungakwenza ucabange, ukuthi unjiniyela we I-Tweedle Kuyafana nekhuriya esiqhathanise nayo.
Imisebenzi yokusebenza nayo I-Tweedle
Ngokuphathelene nezinto ezizokwazi ukusebenza nokuhlanganyela kuzo I-Tweedle uma isivele ixhunyaniswe nephrofayili yethu ye-Twitter, kulula kakhulu ukukhonjwa. Ngokwesibonelo, isithonjana somlayezo (enophawu oluncane +) kuzosisiza ukuthumela okusha kunoma ngubani oxhumana naye; Ukuphela kokufanele ukwenze ukuthinta lesi sithonjana ukuvula isikhombimsebenzisi nesikhala sezinhlamvu eziyi-140, okuyisikhundla esiphezulu semilayezo ezothunyelwa ne-Twitter.
Mayelana nenkinobho yokumisa ku- I-Tweedle (amaphuzu amathathu abheke phezulu ekhoneni eliphezulu kwesokudla), lapho singabuyekeza uhlu lwabalandeli, esibalandelayo, izintandokazi nenani eliphelele lamaTweets esiwashicilele, inqobo nje uma sichofoza ku- «iphrofayili".
Ekucushweni okufanayo kepha kuthinta inketho «olungisiwe»Esikhundleni, sizoba nethuba lokwenza ngokwezifiso i-interface ye I-Tweedle, lokhu kungenxa yokuthi singathola ukuhlela uhlobo lwamakholomu esizowakhombisa, umsindo onezaziso, izingqikithi (izikhumba) ngisho, engeza enye i-akhawunti ye-Twitter kule sevisi. Mhlawumbe lokhu kungenye yezinzuzo zayo, ngoba kusuka kwiklayenti elifanayo singaphatha i-akhawunti engaphezu kweyodwa ye-Twitter uma sifisa.
Imininingwane engaphezulu - TwiBack, shintsha isizinda sakho se-twitter nesithombe ngemizuzwana
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » UTweedle, iklayenti le-Twitter le-Android
I-OnAir, indlela engcono kakhulu yokulalela umculo kumadivayisi ahlukene weselula
MundiVideo Games Umhlahlandlela Wokuthenga Ukhisimusi